Ihowuliseyili Pizza Couple T-shirt yoMvelisi kunye noMthengisi | Into
Xa izibini zithi zifuna ukufumana i-T-shirt, zenza i-T-shirt yeholide, i-honeymoon, isikhumbuzo, okanye usuku lwe-Valentine. Isiko lokunxiba elenziwa ngokwezifiso lifumana ukuthandwa mihla le. Kungenxa yoko le nto i-P-Couple T-shirt yethu iyeyona ikhethekileyo kumnyhadala wakho. Ezi T-shirts ezikumgangatho ophezulu ziya kongeza uyolo kumzuzu wakho wothando.
Unokwenza ukuba ube nesikipa esithandanayo ngokwesiganeko sakho. Unokwenza i-T-shirts zakho njengesixhobo sothando sabantu abathandanayo, kunye ukusukela, uHubby Wifey, uKing kunye noKumkanikazi, kunye noMnu.
I-T-shirt yenziwe nge-100% yoqobo lwe-6-ounce yomqhaphu nge-inaliti eyotyiweyo eyenzelwe ukunceda kwiplagi enye. Ngenxa yezinto ezikumgangatho ophezulu zomqhaphu, uya kuziva ukuba uthamba kwaye uthamba ngalo lonke ixesha emva kokuhlamba. Nokuba emva kwamaxesha amaninzi uhlamba umbala kunye noyilo lwesiko, bobabini baya kuhlala bight.
Umqhaphu oqinileyo notyebileyo woqobo olusindayo kwiiT-shirts zethu zePizza kuyanceda ukuba ihlale ikhuselekile kuyo nantoni na oyiphosayo. Ukufumaneka ngobukhulu obungaphezulu kwe-2,3 enkulu kwenza ezi T-shirts zenzelwe wonke umntu.
Njengoko ii-T-shirts zokutshatisa iPizza zifumaneka ngemibala emihlanu eyahlukeneyo, ikunika ukhetho olungakumbi lokukhetha iimpahla onazo kumbala owuthandayo. Imibala yeT-shirts inokwahluka kancinane emfanekisweni, kodwa iya kuza ngemibala ebonakalayo ebonakalayo, efanelekileyo kwizibini ezitshatileyo.
Singakulibala njani ukuthetha ngamaxabiso ezikipa zePizza? njengoko ezihempe zithelekiswa zitshiphu kwaye zenziwe ngomgangatho ophezulu womqhaphu, zinokufikeleleka ngokulula.
Iseti yeeT-shirt ezimbini zePizza ezenziwe nge-6 oz. 100% yomqhaphu.
Inaliti ephindwe kabini eyenzelwe ukomelela
Ifumaneka nge-White, Black, Grey, Navy, kunye noMbala oBomvu.
Incinci, iphakathi, inkulu, inkulu kakhulu, 2 enkulu kakhulu, 3 ubukhulu obukhulu bufumaneka kokubini emadodeni nakwabasetyhini.
Egqithileyo UKumkani noKumkanikazi abathandanayo beHoodies
Okulandelayo: I-Pizza Couple Sweatshirt
I-T-Shirt yesiqhelo sePizza yesiqhelo
Isikipa sePizza esihlekisayo
I-P-Couple T-shirt ye-Unisex
Isikipa seholide yePizza
Isikipa sePizza Honeymoon
I-Pizza Isikipa nje esitshatileyo
I-T-shirt yokuDibanisa i-Pizza
I-T-shirt yePizza yeeValentine